Momba anay - Jiangxi Lotte Garments Co., Ltd.
Jiangxi LOTTE Garment factory dia natsangana tamin'ny taona 1997, any Nanchang, Jiangxi, izay renivohitry ny akanjo sinoa no misy azy. LOTTE Garment dia mpanamboatra akanjo matihanina izay manolotra serivisy OEM & ODM, avy amin'ny fividianana kofehy, lamba vita amin'ny kofehy, fanapahana, fanjairana hatramin'ny vokatra vita, ary nanome tolotra manokana ho an'ny akanjo, fanodinana akanjo ary fanaovana saritany.
Ny orinasa misy tsipika famokarana efatra lehibe, ny voalohany dia ny T Shirt / Jersey / soccer ambony tanky, ny faharoa dia ho an'ny lobaka polo, ny fahatelo dia ho an'ny palitao / sweatshirts / hoody / pataloha, ny iray kosa ho an'ny akanjo natory / pajama. Saika vita daholo ny akanjo vita ba nataony.
Taorian'ny fampandrosoana nandritra ny taona maro, ny orinasa dia namorona rafitra famokarana henjana sy rafitra fanaraha-maso kalitao henjana. Nahasarika tsikelikely ny sain'ireo marika akanjo malaza, toa ny CLOUD-NINE, DISNEY, JBS WEAR, FOREVER COLLECTIONS, H&M sns sns. Mandritra izany fotoana izany, LOTTE dia nanangana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra sy maharitra amin'ny tetailer sy agents marobe. Karazan'akanjo lehibe ho an'ny lehilahy manarona akanjo ba ba nataony, akanjo ba, T-shirt, Polo, pataloha mahazatra, akanjo fitondra mandry, akanjo mandry, fitafiana sns.
Tao anatin'izay taona lasa izay, ho an'ny fanodinana marika iraisam-pirenena, ny LOTTE Garment dia nifantoka ihany koa ary nametraka dept design. ary ny varotra dept., ary nanangana marika roa tompony sy ambony toa an'i JONN CABOT sy JEAN CABOT. Izany dia tsy hanatsarana ny fahaiza-manao sy ny haavon'ny serivisy ihany, fa koa hampiroborobo ny R & D sy ny fahaizan'ny varotra an'ny orinasa.
Amin'ny taona ho avy, mifototra amin'ny fitsipiky ny fitantanana ny fahamarinana, ny kalitao voalohany, tsy andaniam-bola, LOTTE Garment dia ho lasa orinasa manerantany.
Miorina amin'ny traikefa 23 taona amin'ny fitantanana ny orinasa sy ny fanodinana akanjo, azontsika atao ny miatrika karazana fikolokoloana akanjo ho an'ny lehilahy. Mandritra izany fotoana izany, manana ny departemanta misahana ny famolavolana azy izahay, afaka namboarina ireo akanjo mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa na manampy ny mpanjifa amin'ny fanatsarana ny volavolan'ny vokatra. Homena anao ny tsara indrindra!